Qubanaha » Askari ka tirsanaa ciidanka Kenya ee Somaliya oo qabsatay qiso murugo badan.
Askari ka tirsanaa ciidanka Kenya ee Somaliya oo qabsatay qiso murugo badan.
Apr 19, 2017 - jawaab
Magaca Askarigan waxaa loo qariyay sabab la xiriirta sumacaddiisa, waxaana loo bixiyay magaca KEN oo aan ahayn kiisa rasmiga ah ee sida caadiga ah loogu yaqaan.
Waxa uu ka mid ahaa ciidanka Kenya ee dagaalka u soo galay Somaliya, si uu la dagaalamo Ururka Al-Shabaab.
Askarigan waxaa qabsatay qiso xanuun badan oo uu inteeda badan mas’uul ka ahaa Taliyihiisii xerada tababarka Magaalada Eldoret ee dalka Kenya.
Ken oo 37 jir ah, kana mid ah dadka ku bar baaray Nairobi ayaa ka mid noqday ciidanka Kenya, ma uusan jecleysan markii loo diraayay Somaliya,sababta oo ah waxaa uu ogaa in aysan caano uga horreyn shaqada loo diray.
Taliyihiisa ayuu ka diiday in uu aado Somaliya si uu Al-Shabaab ula dagaalamo, Taliyihii ayaase ku qanciyay,isaga oo u adeegsaday dhaartii uu u galay Difaaca dalkiisa, sidaas ayuuna ku soo aaday Somaliya laakiin maxaa xigay?
Waxa uu Mr Ken, sheegay in hawlgalkooda Somaliya uusan la mid ahayn Suuq laga dukaameysto oo la iska tagaayo, ee waxaa la wajahayaa qibrado kala duwan oo u eeg sida xeerka Kaymaha (Nooleba kan uu ka awoodda badan yahay ha cuno).
Waxa uu arkay saaxiibadiis oo ay qaarkood nafta ka baxeyso, kuwo dhaawac ah, waxaana ay joogeen dal shisheeye oo aanay waligood ka hawlgelin.
Waxaa dheer isaga waxa uu ka soo qaaday wel wel iyo walaac nafsaani ah, Habeenkii uma hurdo si wanaagsan isaga oo hadda jooga gurigiisa Nairobi,waxaana uu ku qarwaa xusuusta wixii uu kula kulmay Somaliya, waxaase uu ka cabsadaa in mar kale la dhaho ku laabo Somaliya si aad shaqadii Qaran u soo gudato.
KEN, waa uu joogaa hadda isaga oo aan dhaawac ahayn, aadna u fiican laakin nasiib darro waxa uu wajahayaa mid ka mid ah xaqiiqooyinka ugu adag ee nolosha, waxa uu soo laabtay isaga oo xaaskiisii ay la nooshahay mid ka mid ah Saraakiishii isaga u dirtay Somaliya.
Markii uu xaaskiisa weydiiyay waxa ku kalifay arrintan waxa ay ugu jawaabtay inay jacayl u qaadday taliyaha oo intii uu tababarka isaga ku jirayba ay haasaawe kula jirtay,taliyuhuna door muhiim ah ku lahaa.
Markii uu weydiiyay halka uu ku dambeeyay jacaylkii isaga kala dhaxeeyay waxa ay ugu jawaabtay “adigaba waad I qiyaantay oo goobaha dagaalka ayaad Dumar ku kufsan jirtay,sidoo kalena Haweenka Ciidanka ku jira ayaad la seexan jirtay,waxaana ii sheegay Taliyahaaga.”
Waxa kale oo ay raacisay in sidan oo kale saaxiibkeedii hore uu qiyaanay si la mid ahna xaasas badan oo ka mid ah Askarta Kenya ee jira Somaliya ay tan oo kale ku dhacday kadibna ka daneysteen.
Mr KEN ayaa iska ooyay sida carruurtii oo kale waxaana uu niyad jab ka qaaday waxa uu ku sameeyay taliyihii ku qal qaaliyay in uu Somaliya aado, waxaa uu xusay in ay tahay murugo aan ka kabsasho lahayn.
Askarigan hadda waxaa ay waxyeello ka soo gaartay maskaxda lama xiriiro Bulshada waxaana uu ku jiraa Gurigiisa oo ku yaalla Nairobi!.
Tarjumidda: Aadan Ibraahim Faarax (Shawqi)